काम धेरै गर्नुहुन्छ ? होसियार ! सजाय भोग्नुपर्ला - Pahilo Online
काम धेरै गर्नुहुन्छ ? होसियार ! सजाय भोग्नुपर्ला
कुनैपनि कामदारले कार्यक्षेत्रमा जति धेरै काम गर्यो उति नै धेरै मालिकको प्यारो हुनुपर्ने हो । तर एकजना कामदार भने आवश्यकता भन्दा बढी काम गर्दा दण्डित भएका छन् ।
घटना फ्रान्सको हो । फ्रान्समा हरेक कामकाजी मानिसले हप्तामा एक दिन विदा लिनै पर्दछ । यदि आफ्नै व्यवसाय छ भने पनि यो नियम लागू हुन्छ ।
राजधानी पेरिसको १२० माइल दक्षिण पूर्वमा पर्ने लेक बेकी क्षेत्रमा उनले बेकरी पसल सञ्चालन गरेका छन् ।यही नियम नमान्दा आफ्नै बेकरी पसल चलाएका सेडरिक भाइव्रेले साढे ३ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बराबरको जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
समर सुरु हुनैलाग्दा बेकरीमा डिमान्ड उच्च भएपछि माग पूर्ति गर्नका लागि उनले हप्तामा सातै दिन लगातार काम गरे । तर स्थानीय श्रम कानूनले उनलाई पक्रियो । कामदारमाथि शोषण गरेको भन्दै बेकरीहरुविरुद्ध स्थानीय प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रशासनले सेडरिकमाथि ३ हजार युरो जरिवाना गरेको छ ।
आफूमाथि कारवाही हुँदा सेडरिक त चिन्तित छन् नै यसले हरेक बिहान ताजा बेकरी खान पाएका गाउँलेहरु पनि आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले सेडरिकमाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् ।
आईतवार, ४ चैत्र २०७४, १०:४९ March 18, 2018 मा प्रकाशित
पोखरामा एक महिलाबाट एकैपटकमा चार सन्तानको जन्म
पथरीमा एकै पटकमा तीन सन्तान जन्मिए